Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Tilmaame ku saabsan Sida loo doorto Tuubbooyinka Jikada ugu Fiican
2020 / 11 / 08 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9003 0
Maanta, qasabadaha jikada waxay ku yimaadaan dhismayaal ballaaran oo firfircoon. Qasabadaha muuqaalkoodu u muuqdo waxay ku eegi doonaan waxyaabo aan caadi ahayn jikada qaabka caadiga ah, halka qasabadaha casriga ahi ay ammaani doonaan qaabka jikada jarista. Si aad u hesho wowow qasabad ama qasabadaha, waxaa jira xaglo badan oo aad u baahan tahay inaad ka fikirto, tusaale ahaan, adkeysi, qaab, ku dar, cabir, dhammeyn, iyo nooca qalabka. Ka sokow, waxaad intaa dheer u baahan tahay inaad ka fikirto awoodda. Tuubbooyinka jikada ee ugu wanaagsan waa inay u ekaadaan si weyn. Si kastaba ha noqotee, waa inay sidoo kale lahaadaan astaamo yar oo kala duwan, tusaale ahaan, adkeysi iyo la qabsi.
Iskusoo wada duuboo, waa inaad ogaataa noocyada kala geddisan ee qaababka la heli karo: keli ah oo qasabadaha lagala macaamilo, laba / laba ayaa lagu daryeelay fureyaasha, qaabka qubeyska ee bixitaanka (oo leh hal ama labalaab oo lagu iibiyo daboolka), qasabadaha kala qaybiya, iyo qasabadaha saxanka. Kalidaa lagula macaamilo unugyada waa mid deg deg ah oo toos ah u shaqeynaya maadaama ay leedahay hal beddel. Mar labaad, laba jeer ayaa laga taxadiray oo ka kooban waalka biyaha karkaraya iyo waalka biyaha fayraska. Si wada jir ah, labadan nooc ayaa la socon kara kala bixid, taas oo loo adeegsan karo in lagu nadiifiyo saxanka ama lagu dhaqo khudradda.
Qasabadaha casriga ah waxaa si joogto ah loo soo saaraa iyadoo la adeegsanayo biro leh dhammaystir kala duwan, tusaale ahaan, dahaadh dahab ah iyo dhammayn budo lagu daboolay. Si kastaba xaalku ha ahaadee, macdanta waxaa ku jira macdanta "lead" oo sababi karta waxyeelo leedh oo mustaqbalka fog u horseedi doonta arrimo caafimaad oo badan. Sababtaas awgeed, dhammaan soo saarayaasha qasabadaha Mareykanka gudaheeda looma oggola inay ku xusuustaan ​​in ka badan 8 boqolkiiba walaxdan qasabadooda birta ah, sida ku xusan Sharciga Biyaha Cabbitaanka Badbaadada ah. Haddii aad ka walwalsan tahay samaqabkaaga, waa inaad baaritaan ku sameysaa xulashooyinka kale, tusaale ahaan, qasabadaha dhoobada ah maadaama farshaxannadu aysan ku jirin isku-darka isku-dhafan ee halista ah ee dhaawici kara jirkeena.
Maskaxda ku hay, qaababka kala duwan ee qasabadaha ayaa leh awoodo badan. Buuxiyeyaasha dheriga waxay leeyihiin furfurmo fara badan oo qalooca si ay kuugu oggolaadaan meel kugu filan oo aad dhigto maraakiibta waaweyn, tusaale ahaan, dheriyo kayd ah ama haamaha biyaha hoostooda. Haddii aad u baahan tahay meel aad u ballaadhan, waa inaad doorataa qayb qaybsan oo qaybsan. Maanta, xitaa waad ogaan kartaa qasabadaha jikada ee lagu xiro waxyaabo muhiim ah oo faa'iido leh, tusaale ahaan, kontaroolada tubbada lagu xidho iyo qalabka biyaha lagu sifeeyo. Markasta iyo marwalba, waxyaabahan muhiimka ah ee goos gooska ah lama heli karo dhammeystir kasta ama qaab kasta.
Dad badan oo Soosaarayaasha qasabada jikada waxay naftooda u hureen sidii ay u samayn lahaayeen heerka ugu sarreeya iyo qasabadaha ugu caqliga badan muddo dheer, xitaa da '. In kasta oo dukaanka agabka deriska ugu dhow shaki ku jirin uu kugu deeqi karo qasabado tayo leh, waxaad sidoo kale u malayn kartaa barta soo-saaraha si aad u hesho fikrado habeysan.
Hore:: Raadi Tubooyinka Jikada Next: Qasabadaha jikada dib loo eegay - Qasabadaha Jikada ee ugu Fiican Dhamaan Naqshadaha iyo Baahiyaha